कुसुण्डा भाषा सिक्ने कि ? « Drishti News – Nepalese News Portal
कुसुण्डा भाषा सिक्ने कि ?
देउखुरी । लोपोन्मुख कुसुण्डा भाषाको संरक्षण गर्न नयाँ पुस्ता अगाडि आएको छ । यस भाषालाई जीवन्त राख्न नयाँ पुस्ता बोलचाल र एकापसमा कुराकानी गर्दा कुुसुण्डा भाषा प्रयोग गर्छन् । उनीहरु आफूले जानेका शब्द गीतका माध्यमबाट सुनाउने र त्यसलाई नेपालीमा उल्था गरेर भन्न सक्ने भएका छन् ।
प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिका–६ बूढीचौर घर भएकी हिमा कुसुण्डा घोराही उपमहानगरपालिका–५ धर्नास्थित महेन्द्र माविमा कक्षा १० मा अध्ययन गर्छन् । उनी अहिले कुसुण्डा भाषामा गीत रचना गरेर सुनाउन सक्ने भएका छन् । मातृभाषा भएर होला, उनी सिक्न र संरक्षणमा जुटेका छन् । उनले यसअघि आफ्नो भाषाका केही कुरा हजुरबुबासँग सिकेका थिए । उनी अझै धेरै सिक्न बाँकी भएकाले साथीसँग मिलेर यस वर्ष पनि थप कुरा सिक्दै साथीलाई सिकाउँदै छन् ।
सोही विद्यालयमा कक्षा ८ का प्रेमी कुसुण्डा विद्यालयको छात्रावासमा बसेर अध्ययन गर्छन् । उनी आफ्नो मातृभाषा कुसुण्डा भए पनि बोल्न आउँदैनथ्यो । आजभोलि विद्यालयमा बिहान कुसुण्डा भाषा सिक्न थालेदेखि उनले भेट्ने जति सबैलाई सोजाक (नमस्कार) भन्न थालेका छन् । आफ्नो मातृभाषा सिकेमा लोप हँुदैन भन्ने लागेको उनले बताए ।
‘सुरुशुरुमा त भाषा बुझिँदैनथ्यो, पढ्दै जाँदा सबै जान्ने भएका छौँ, यो भाषा पढ्ने साथीहरु एकापसमा कुरा गर्दा कुसुण्डा भाषामा कुरा गर्ने गरेका छौँ’ उनले भने, ‘पढ्दै जाँदा सजिलो भएको छ, (तपाईँको घर कहाँ हो?) भन्न परेमा ‘निगी उही हाना’ भनेर सोध्छौँ ।’
अनिल कुसुण्डा सोही विद्यालयमा कक्षा २ मा अध्ययनरत हुनुहुन्छ । उनको मातृभाषा कुसुण्डा भए पनि बोल्न आउँदैनथ्यो । विद्यालयको पढाइका अतिरिक्त कुसुण्डा भाषा सिक्न थालेपछि भाषाको ज्ञान धेरै भएको छ अरु साथीहरुसँगै उनी पनि कुसुन्डा भाषा सिकेर कुराकानी गर्छन् ।
घरपरिवारमा सबैले नेपाली भाषा बोल्ने भएकाले नेपाली बाहेकको अरु भाषा आउँदैनथ्यो । उनले भने, ने, ‘अहिले आफ्नो मातृभाषा सिक्दा धेरै खुशी भएको छु र बोल्न जान्ने पनि भएको छु ।’
घोराही–१८ सुपैलाटोल निवासी उर्मिला कुसुण्डा जोखिममा परेको आफ्नो भाषा बोल्न सिकेका छन् । उनले अहिले आफ्नै टोलमा २० कुसुण्डालाई भाषा कक्षा चलाएर सिकाउन थालेका छन् ।
कमला खत्री सेन पनि सोही ठाउँमा बस्छन् । उनका सहयोगमा आफूले सिकेको भाषा अहिले सबैलाई सिकाउन थालेको उर्मिलाले बताए । आफ्नो टोलमा कुसुण्डा बस्ने भए पनि भाषा उनलाई बोल्न आउँदैनथ्यो अहिले सबै जना कुसुण्डा भाषामा कुराकानी गर्न थालेका छन् । उर्मिला १२ कक्षा उत्तीर्ण गर्ने कुसुण्डाका छोरीहरुमध्ये पहिलो हुन् ।
कुसुण्डा भाषा वा पाठ्यपुस्तक लेखक उदयराज आले दाङमा कुसुण्डा भाषा बोल्ने मानिस धेरै भएको बताउँछन् । आफ्नो मातृभाषा नेपाली भए पनि संरक्षणका लागि अनुसन्धान गरी पाठ्यपुस्तक तयार पारेर अर्को पुस्तालाई सजिलो गराइदिएको उनले बताए ।
‘बिहानका समयमा आफैँ ती बालबालिकालाई भाषा सिकाउन २३ किलोमिटर टाढाबाट घोराही आउँछु, त्यहाँबाट छ किमीमा रहेको विद्यालयमा भाषा सिकाउन आउने गरेको छुु’, उनले भने, ‘लेख्य भाषा भएन भने भाषा मर्छ, यसलाई जीवित राख्न लिपिबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने लागेर पाठ्यपुस्तक तयार पारिएको हो । मातृभाषा कुसुण्डा भए पनि पढ्न आएका बालबालिकाले बोल्न र लेख्न जान्दैनथे । पाठ्यपुस्तक भएपछि उनीहरुलाई पढ्न सजिलो भएको छ ।’ अब नयाँ पुस्ताले भाषा सिक्न थालेपछि संरक्षण हुने र लिपिबद्ध गरेर जीवित राख्न सक्ने आशा राखिएको उनले बताए ।
तीन वर्षअघिदेखि घोराही–५ स्थित महेन्द्र मावि, धर्नामा छात्रावासमा बसेर बालबालिकाले कुुसुण्डा भाषा पढिरहेको सोही विद्यालयका प्रधानाध्यापक ऋषिराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
सरकारले लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवासको व्यवस्था गरेपछि शिक्षाको पहुँचभन्दा टाढा रहेकाहरुको शिक्षामा पहुँच पुगेको हो ।
कुसुण्डा भाषाका वक्ता ज्ञानीमाया सेनको गत वर्ष ८५ वर्षका उमेरमा निधन भयो । दाङमा कुसुण्डा भाषाका दुई मात्र जीवित वक्ता कमला खत्री सेन र प्रेमबहादुर कुसुण्डा मात्र छन् । उनीहरुलाई भाषा बोल्न आउँछ तर लेख्न आउँदैन । ‘आफूसँगै भाषा पनि लोप हुन्छ कि भन्ने चिन्ता लागेको थियो, अहिले तल्लो पुस्ताले पनि भाषा सिकेको देख्दा खुशी छु । भाषा बचाउन तल्लो पुस्ता लागिपरेको छ । उनीहरुले लेखेर राख्दैछन्, अब हराउँदैन । भाषासँगै संस्कृति पनि हराउँछ, यसलाई जोगाएर राख्न आवश्यक छ भन्ने मलाई थाहा थिएन, म बोलेर सबै कुरा सिकाउँदै छु’ उनले भने ।
नेपालमा मात्र बोलिने १२३ भाषामध्ये २१ भाषा एक हजारभन्दा कम मानिसले बोल्छन् । विसं २०५८ को जनगणनानुसार नेपालमा कुसुण्डाको संख््या १६४ तथा वक्ताको संख्या ८७ उल्लेख गरिएको छ । विसं २०६८ को तथ्यांकनुसार नेपालमा कुसुण्डाको जनसङ्ख्या २१३ र वक्ताको संख्या २८ उल्लेख छ ।
कुसुण्डा विकास समिति, केन्द्रीय कार्यालय दाङले अध्ययन गरेर दाङ, सुर्खेत, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, गोरखा र तनहुँमा जम्मा कुसुण्डाको सङ्ख्या १५० उल्लेख गरेको छ ।
लोप हुन लागेको कुसुण्डा भाषा बचाउन आयोगले दाङमा दोस्रो चरणमा दुई स्थानमा कक्षा सञ्चालन गरेको भ आयोगका उपसचिव गेहनाथ गौतमले जानकारी दिए ।